minnesota ara-dalàna ny filokana fanaraha-maso ny birao
minnesota poker hall ny fame
Miorina ao Olympia, Washington, ny Nisqually Mena Elatra Casino dia lalao fananana izay tany am-boalohany nisokatra tamin'ny 1997 loosest slots am-venetian. Ny drafitra ataontsika dia tokony ahitana ny 5 taona, ny 10 taona, ary 20 taona ny safidy minnesota ara-dalàna ny filokana fanaraha-maso ny birao. Tendrena ho architectural orinasa sy mpandraharaha mandra-pahatongan'ny 7 febroary ao amin'ny 1 p.m.mba hifandray ny fitantanan'ny biraon'ny Nisqually Mena Rivotra Casino mba handefa ny tolo-kevitra.
Amin'izao fotoana izao, ny casino an-trano ny 975 lalao milina 22 ary ny latabatra lalao. Ny Nisqually Indiana Foko manana drafitra maharitra mba hanitatra ny faritra maro ny fananany. Ao ny filazàna araka ny lalàna, dia nilaza fa ny casino dia nitady matihanina sy fandaminana architectural orinasa mba hanome tolo-kevitra amin'ny fikasana ho ela isan-karazany ny fandrindrana ny casino fananana minnesota-panjakana walleye slot fetra.
Ny Nisqually Foko dia liana amin'ny fanitarana ny lalao asa ary koa ny fampivelarana ny trano fandraisam-bahiny amin'ny fivoriambe foibe ary koa ny fanatitra kokoa fijanonana minnesota poker hall ny fame.